जनता बैंकद्वारा अछाममा पाँच वटा शाखा रहित सेवा बिस्तार
काठमाडौं, असोज १७ । जनता बैैंक नेपाल लिमिटेडले अछामको पाँच क्षेत्रमा शाखा रहित सेवा बिस्तार गरेको छ । बैंकले यू.के.एड. सक्षम एक्सेस टु फाईनान्सको सहकार्यमा शाखा रहित सेवा बिस्तार गरेको हो । बैंकले ...
अल्पाइनको हकप्रद बाँडफाँड
काठमाडौं । अल्पाइन डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडले हकप्रद शेयरको बाँडफाँड असोज १४ गते गरेको छ । कम्पनीले रू. ८ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद शेयरको निष्काशन गरेको हो । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बि...
सेवा विकास बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाण्डौ । सेवा विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । असोज १६ गते बसेको बैंकको बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर र...
कैलास बिकास बैक स्थापनको २४ औ बर्षमा
काठमाडौ । असोज १५ , कैलास बिकास बैक स्थापनाको २४ औ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैक २०७३ असोज १४ गतेका दिन २३ औं बर्ष पुरा गरी २४ औं बर्षमा प्रवेश गरेको हो । बैंकले आफ्नो बार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौं उप...
सिटिजन्स बैंकद्वारा सहज तरिकाले निजी आवास अनुदान वितरण
काठमाडौ, असोज १५ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले सहज तरिकाले निजी आवास अनुदान रकम वितरण गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बीच भूकम्पबाट क्षति भएका निजी...
एनआईसी एशियाको क्रेडिट कार्डमा दसैं तिहार योजना
काठमाडौ । असोज १५,एन आई सी एसिया बैंकले आप्mना ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखि दशैं तिहारको अवसरमा निःशुल्क क्रेडिट कार्ड योजना अघि सारेको छ । निःशुल्क क्रेडिट कार्ड सगैं यस महत्सवमा वैदेशिक भ्रम...
सन्धुदिप सहकारी संस्थाबाट नगद चोरी
सिन्धुपाल्चोक, असोज १३ । हैबुङ–३ काउले दोभानस्थित सिन्धुदिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट बुधबार राति ढोकामा लगाएको साँचो फुटाई घर्रामा रहेको नगद ४ लाख ९१ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ चोरी भएको छ । फरार चोर...
निर्धन उत्थानले सेयरधनीलाई सेयर र नगद लाभांशको घोषणा
काठमाण्डौ । निर्धन उत्थान बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई एकसाथ सेयर र नगद लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०२७/७३ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र ११.५७९ प्रतिशत नगद ला...